Carraa yaa’ii seena qabeessa kana qopheessuu argachuu keenyaf gammachuutu nutti dhaga’ama-Aadde Mufiriyaat Kaamiil – Fana Broadcasting Corporate
Carraa yaa’ii seena qabeessa kana qopheessuu argachuu keenyaf gammachuutu nutti dhaga’ama-Aadde Mufiriyaat Kaamiil
Finfinnee, Fulbaana 23,2011(FBC)-Dhaabbanni Sochii Dimokiraatawaa Ummattoota Kibba Ityoophiyaa(SDUKI) carraa yaa’ii seena qabeessa kana qopheessuu argachuu gammachuu guddaatu nutti dhaga’ama jedhan Dura teessun dhaabbatichaa Aadde Mufiriyaat Kaamiil.
Aadde Mufiriyaat Kaamiil yaa’ii ADWUI 11ffaa irratti haasawa baniinsa taasisaniin hirmaattoota yaa’ichaaf gara magaala Hawaasaa imalan baga nagaan dhuftan jedhaniiru.
Yaa’ii 11ffaa ADWUI magaala guddittii Saba Sablammoota fi Ummattoota Kibbaa Hawaasatti gaggeeffamu kanarratti hanqinoota fi ciminoota akka dhaabatti waggoottan darban mul’atan xiyyeeffannoo guddaan xinxalamu ta’uu Aadde Mufiriyaat ibsaniiru.
Rakkoowwan adda bahan irratti hundaa’unis kallattiin gara fuula duraa ni kaa’ama jedhaniiru.
Aadde Mufiriyaat qophii yaa’ii seena qabeessa kanaaf qaamolee gahee isaan irraa eeggamu kallattii garaa garaan bahachaa turan galateeffataniiru.
Jiraattonni lixa Oromiyaa qaamoleen hidhatanii socho’an bakka nu hin…
Oromiyaan lafa heektaara miiliyoona 6 midhaanin misoomsuuf hojjechaa jira
Chaayinaa Choongichiingii gara Finfinneetti balaliin fee’umsaa jalqabaa…
Ityoophiyaa fi Jarman koomiishinii waloo hundeessuuf waliigalan